Xukuumadda Somaliland maxay ka tidhi Magacaabista Ergayga Cusub ee Q Midoobay | Salaan Media
Xukuumadda Somaliland maxay ka tidhi Magacaabista Ergayga Cusub ee Q Midoobay
June 5, 2013 | Published by: Hamse
“Waxa Horyaala Qodobo Aan Fududayn, Somaliland-na waxay Kala Hadlaysaa Qaabka aanu u wada Shaqaynayno”
ADDIS-ABABA (SM)- Xukuumadda Somaliland ayaa markii u horeysay ka dareen celisay aragtideeda la xidhiidha magacaabista Ergayga Xoghayaha guud ee qarramadda Midoobay u qaabilsan Somaliland/Soomaaliya Nicholas Kay oo Isniintii xilka kala wareegay Ergaygii hore Augustina Mahiga.
Xukuumadda Somaliland waxa kale oo ay sheegtay in ergayga cusub laba todobaad ee u horeeya muddo xileedkiisa uu socdaal ku iman doono dalka si ay ugala hadasho qodobo adag oo la xidhiidha hanaanka ay u wada shaqaynayaan Somaliland iyo xafiiska UNSOM loo bixiyay.
Sidaasi waxa shaaca ka ka qaaday Wasiirka Arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo xalay khadka Telefoonka ugu waramayay Tifaftiraha Guud ee Wargeyska DAWAN Cumar Maxamed Faarax, isagoo isla xalay soo gaadhay magaaladda Addis-ababa ee dalka Itoobiya ka dib markii uu ka soo kicitimay Kenya oo uu muddo todobaad ah ku sugnaa.
“Ergayga cusub ee Qarramadda Midoobay u qaabilsan Somaliland/Soomaaliya Mr. Nicholas Kay, waa nin dublamaasi ah oo Ingiriis ah, waxa imika xilkan ka hor uu muddo sanad ah ahaa Agaasimaha guud ee Wasaaradda Khaarajiga Ingiriiska u qaabilsan Afrika, waxa kale oo uu soo ahaa danjiraha Ingiriiska ee Suudaan iyo Nayjeeriya,”ayuu yidhi Wasiirku.
“Somaliland ahaan waa nin aanu la shaqaynay intii uu ahaa Agaasimaha Arrimaha Afrika waxaanan ka mid ahaa madaxdii aanu ka wada hadli jirnay shirkii hore ee London lagu qabtay iyo kii dambeba, markaa waa nin dublamaasi ah oo weyn waanan soo dhawaynaynaa,”ayuu sheegay Wasiirka Khaarajigu.
Dr. Maxamed Cabdilaahi oo hadalkiisa sii watay waxa uu intaasi ku ladhay “Waa Nin Somaliland yaqaana, si wanaagsanna u kala fahmaya Somaliland iyo Soomaaliya, intii aanu la kulmaynay waxaanu u aragnay nin degan oo aan go’aamadda ku deg-degin. Waxaanan rajaynaynaa inaanu xidhiidh wacan la yeelano.”
“Inkasta oo magacaabistiisu ay ku soo beegantay xili la bedelay xafiiskii hore ee ergeygii hore ee UNPOS, waxaana laga dhigay UNSOM. Waxaana loo xil saaray sidii uu uga shaqayn lahaa in heer dimuqraadiyadeed laga hirgeliyo Soomaaliya oo si ay doorashooyin xor ah u gaadhaan sanadka 2016-ka,, in kooxaha siyaasadeed ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya uu ka gacan siiyo isu soo dhawayntooda iyo qodobo badan oo kale oo aan fududayn in Soomaaliya laga hirgeliyo,”ayuu intaas raaciyay Wasiirka Khaarajigu.
Dr. Maxamed wuxuu intaasi raaciyay “Waxa kale oo waajibaadkiisa shaqo ka mid ah inuu gacan ka geysto sii socoshada wada hadaladda u socda Somaliland iyo Soomaaliya.”
Wasiirka oo aanu weydiinay inay la xidhiidheen ergaygan cusub tan iyo intii xilkan loo magacaabay, waxaanu ku jawaabay “Haa waanu la xidhiidhnay, waxa lagu wadaa inuu laba todobaad ee u horeeya xil hayntiisa uu socdaal rasmi ah ku yimaado Somaliland si aanu uga wada hadalno qodobo badan oo ku wajahan hanaanka aanu u wada shaqaynayno xafiiskiisan cusub iyo guud ahaan xidhiidhka iyo wada shaqaynta Ha’yadaha qarramadda midoobay oo dhammaan isaga hoos imanaya.”